विप्लवको बन्दीपुर बैठकमा के भैरहेछ ? – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun विप्लवको बन्दीपुर बैठकमा के भैरहेछ ? – damaulinews.com | No. 1 News Portal of Nepal – Latest news of Tanahun
५ आश्विन २०७८, मंगलवार २०:१६
दमौलीः नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाको तनहुँको बन्दीपुरमा जारी ११ औं पूर्ण बैठक अझै सकिएको छैन ।
गत शुक्रबारबाट जारी खुला राजनीतिमा आएयताको पहिलो बैठकमा पार्टीको भावी राजनीतिक कार्यदिशा तथा सांगठनिक अवस्थालगायतका विषयमा छलफल भैरहेको छ ।
बन्दीपुरको एक रिसोर्टमा जारी बैठक आज सक्ने भनिए पनि यो समाचार तयार पार्दासम्म बैठक सकिएको सूचना सार्वजनिक भैसकेको छैन । नेताहरु सञ्चारसम्पर्कबाहिर रहेर बैठकमा सहभागी भएकाले आधिकारिक सूचना सार्वजनिक भएको छैन ।
तर पनि आज राती अबेरसम्म भए पनि बैठक सकेर पोखरामा बुधबारबाट शुरु हुने अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुने योजना नेताहरुको छ ।
बैठकमा पार्टी महासचिव नेत्रविक्रम चन्दबाट प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । स्थायी कमिटी सदस्य खड्गबहादुर विक प्रकाण्डले समेत राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने तयारी गरे पनि सचिवालयको संयोजनमा एउटै प्रस्ताव तयार भएको र त्यसमा नेताहरुले धारणा राखेको बताइन्छ ।
पार्टीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि अब पोखरामै यसबारे विवरण सार्वजनिक हुने निकट पत्रकार ओम हमालले जानकारी दिए ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको ५ आश्विन २०७८, मंगलवार २०:१६ 100 Viewed